အိမ်မက်တွေထဲက အမည်းရောင်လေးတစ်ကောင်.. | HoLOLo....DiLoLO
August 15, 2010 by hololodilolo	story Blacky, Cujo, Dog
← ဖတ်ရှုခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း
One thought on “အိမ်မက်တွေထဲက အမည်းရောင်လေးတစ်ကောင်..”
နင်ရေးတတ်လိုက်တာ… နင့်သွားပြီး…. 😦 အဲ့ ဘလက်ကီက ငါ့လည်း အလွတ်မပေးဝူး.. တခါတခါ အေးဆေးနဲ့… တခါတခါကျ ဖြဲခြောက်တတ်တာ… ဘ၀ထဲမှာ အမှတ်တရတွေကလည်း ဖြတ်ခနဲ့ ၀င်လာပြီး ဖြုတ်ကနဲ့ လွင့်ထွက်သွားလိုက်ကျတာ.. တရိပ်ရိပ်နဲ့…. အရာရာဟာ မနေ့တနေ့က အတိုင်းပဲ…